Manao ahoana ny famoahana vaovao eto amin'ny Gasypatriote sy Facebook
mercredi, 04 juillet 2018 13:47
- Manana solontena manerana ny Nosy ny Gasypatriote, ka ireny mpanao gazety na correspondant any ireny no mitrandraka ny vaovao sy sary any an-toerana.
Malalaka tokoa izy ireo amin'ny vaovao omeny sy ny fanehoan-kevitra tiany ampitaina ao anatin'izany.
Miankina amin'ilay mpanao gazety any an-toerana izany ny fomba fanoratra sy ny teny ampiasaina ao anatiny.
Alefany aty amin'ny Rédaction ilay lahatsoratra, mandalo ny fanamarinana avy amin'ny Rédaction, fanamarinana ny votoaton'ny lahatsoratra. Raha lahatsoratra manana endrika saro-pady, manonona anaran'olona, kolikoly avo lenta, na dossier mafana, na faty olona dia misy fanamarinana fanampiny takiana amin'ilay correspondant, na ny Rédaction no mitady fanampim-baovao avy amin'ny loharano hafa (sources), ka mety loharano 3 na 4 mihitsy no mitovy vao mamoaka ilay lahatsoratra.
Avy eo dia mandalo fanitsiana tsipelina sy mety fanamboarana ny fehezan-teny, izay tsy manova ny hevitra ampitaina.
Izay vao mahazo avoaka, na eto amin'ny FB, na amin'ny site www.gasypatriote.com
- Misy indray, ny Rédaction mihitsy no maniraka, hikaroka vaovao iray momba lohahevitra iray, na haka fanampim-baovao araky ny loharano sy sihosiho heno nefa mbola tsy voamarina. Ohatra, misy fiara mitondra rongony niainga avy any Ihosy, dia ao Antsirabe no tsenaina.
- Misy ireo vaovao anampiana ny mpamaky fotsiny fa tsy misy fanamarinana betsaka hatao, ohatra, ho avy ny vacances dia ohatrinona ny saran-dalana eny amin'ny Taxi-brousse.
Na misy fetim-pirenena dia irahina avokoa ny Correspondant rehetra hanome vaovao momba izay, na ny fanomanana, na ilay hetsika, na ny resaka manodidina izay.
- Misy ireo vaovao avy amintsika mpamaky, na olon-tsotra, ao no tsy ilana fanamarinana lava be, matetika dia takiana sary izy ireny, ao kosa ny dossier tena saro-pady tonga aty ka dia hakana fanamarinana marobe.
- Misy indray fanehoan-kevitra toy ny éditorial soratan'i Anonymous, malalaka tanteraka amin'ny fanehoan-keviny izy, matetika dia mifanandrify amin'ny vaovao mafana ara-politika na ara-toekarena na sosialy no ataony. Tsy misy sivana na kely aza ny fanehoany hevitra, na tsy hitovy amin'ny hevitry ny gazety aza izany.
Mety misy izany ireo vaovao sarotra avoaka nefa fantatra fa misy fanapahan-kevitra efa homanina momba izany any amin'ireo mpitondra dia ny éditorialiste no milaza izany amin'ny endrika analyse na hoe zavatra mety hitranga. Ohatra ireny fikasana hanao Ni Ni ireny, sy fikasana hibahana kandida ireny, izay hita porofo taty aoriana tamin'ireny resaka bulletin numéro 2 sy numéro 3 nampidirina tanatin'ny loi électorale niteraka savorovoro ireny.
- Misy ireo fampianarana sy fanabeazana ataon'ny gazety, toy ireny hoe "Fantatrao ve", manazava momba ny resaka fandovana, Lalàna momba ny tany, momba ny fihazonana vonjy maika na MD, izay isaorana hatrany isika manome an'ireny...
Sarotra tokoa ny fahazoana vaovao avy amin'ireo tompon'andraikitra, satria matetika rehefa mivoaka ilay lahatsoratra dia ho fantatra iza no namoaka ilay vaovao, satria toa ireny raharaha kolikoly avo lenta ireny dia ny ao an-trano ihany no mahalala, ka mora ho fantatra iza no namoaka ny vaovao, nefa leo ny zava-misy ao an-trano ny tompon'andraikitra maro ka dia milaza ny marina hianjadian'ny mpiasa ao.
Izahay kosa dia miantoka hatrany ny tsiambaran-telon'ny asa, ka na polisy, na zandary na fitsarana, dia tsy misy miteny ny fiavian'ny vaovao izahay. Izay no asanay, miaro ireo mpanome vaovao.
- Rehefa inona no atao amin'ny teny malagasy na teny frantsay ny lahatsoratra?
Miankina hatrany amin'ny mpanoratra ilay lahatsoratra ny teny ampiasaina, miankina ihany koa amin'ny olona tiana ahita ilay lahatsoratra.
Tsy dia manao dikateny hatrany amin'ny lahatsoratra ny gazety mba tsy hiverina indroa ilay lahatsoratra, misy ihany koa ezaka atao hifehezana ny teny Malagasy, nefa ihany koa mila mianatra teny Frantsay isika.
Ny lahatsoratra natomboka tamin'ny teny Malagasy ohatra, dia tohizana amin'ny teny Malagasy hatrany raha misy fivoarany ilay vaovao.
Ohatra, nisy lozam-pifamoivoizana, naratra 50, maty 4, niditra hopitaly 6. Ny ampitson'iny nisy 1 hafa maty teny amin'ny hopitaly, dia tohizana amin'ny teny Malagasy hatrany ilay lahatsoratra ka ampahatsiahivana ny lasa ary miampy ny vaovao fanampiny.
Raha tena goavana ilay vaovao, dia avoaka amin'ny teny Malagasy sy teny Frantsay.
Tsy ho hary voadika teny Malagasy na Frantsay avokoa izany ireo vaovao marobe mivoaka isan'andro eto.
Ny tanjon'ny Gasypatriote dia ny ahazoantsika vaovao mari-pototra, maro, isam-paritra sy iraisam-pirenena eo amin'ny adiny 4 raha ela indrindra amin'ny vaovao iray mafana.
Ny vaovao Gasypatriote izany tsy misy andro na ora hijanonany fa na andro na alina, na fety na andavan'andro dia misy hatrany arakaraky ny fisehony.
Mankasitraka ireo correspondant miasa mafy mitady vaovao, ary misaotra antsika rehetra mandefa vaovao ihany koa, ary ireo mpandraharaha matoky ka manome publicité ahafahana mampandeha ny asa fanomezam-baovao jifain'ny maro tsy vidiam-bola.